"Siyi-Woodsball" asikwazanga ukuhlala
Ngaphezulu kwamashumi ambalwa eminyaka yokuqala, ipalati yepopu yokuncintisana yavela kwimidlalo yokusinda kumcimbi owangaphandle owenziwe kwimithi ukuya kwindlela echazwe ngakumbi yendlela yokutyelela. Abakhiqizi abaninzi bebhokisi bepalini ngeli xesha bahamba phambili kunye nabo ekugxininiseni ngokugqithiseleyo kwimiba yezemidlalo. Nangona abanye abavelisi bebegxile kwizihlwele eziqalayo (ngebhokisi le-woods, i- mil-sim okanye i-speedball focus), ezininzi iinkampani eziphezulu ziye zashiya iintlanga.
Kwakungenalutho kwi-woodsball engenanto xa i-Special Ops Paintball yafika kwindawo ngo-2004.
I-Ops ekhethekileyo yePaintball, ukususela ekuqaleni, yayifuna ukuhlukela kwezinye iikhampani ekujoliswe kuyo kwiintlanga kwaye kuya kubhekiselwa kwisihlwele esiphakeme. Ngo-2009, i-flash flash yenkampani kwi-pan, nangona kunjalo, yayizakuphela.
2004 yithuba elifanelekileyo lokuqalisa ishishini lokupenda ibhola. Uqoqosho lwaluqhuba kakuhle kwaye kwakukho inzala ephindaphindiweyo kwipalball ngokubanzi. Nangona kwakukho ukhuphiswano oluphezulu phakathi kwabakhi beebhamu eziphezulu ekupheleleni izilwanyana, ukutya kwakungekho nto ye-woodsball gear. I-Ops ekhethekileyo (okanye i-Spec Ops, njengoko yayidla ngokuqhelekileyo) yaqaphela le nto kwaye, kunye ne-"We Are Woodsball" isiqubulo kunye nokunyuswa okukhulu kwemali ukuqala ishishini, bangena kwiimakethe zentengiso, ngokugqithisa.
I-Ops ekhethekileyo yayineendlela ezimbini ezibalulekileyo zemveliso: ukuphuculwa kwezixhobo eziphezulu zokulungiselela ezinye izixhobo zokusebenza (ngamanye amaxesha zivele zifakwe, kwaye zithengiswa kunye neepalati zepalati ) kunye nempahla epholileyo, ebandakanya iimpahla kunye neengubo.
Ukuphuculwa kwabo kwakujoliswe ukwenza izibhamu, ezifana neTippmann A-5 okanye i-Smart Parts Ion, ngakumbi ngakumbi kubadlali be-woodball. Ingaba izixhobo eziphuculweyo zisebenza kakuhle, kodwa zakhiwe kakuhle, zikhangeleka kwaye zibiza. Ekuqaleni, la ma xabiso aphezulu ayengakhathazeki njengoko abantu babefumana imali engenayo kunye nokuchitha iidola ezilikhulu kwisitampu somfulo, umzekelo, kwakukho kwindawo yokuba baninzi abadlali bepalballball.
Ukukhutshwa kunye nokuthengisa, nangona kunjalo, kwakungeyona nxalenye enye ye-Special Ops ifom. Inkundla yesibini yenzalo yayiyikcubeko le-woodsball. Ii-Ops ezikhethekileyo zifuna ukubonisa ukuba ibhodi ye-woods yayingeyona nje umdlalo wezinga lokungena kubadlali bepalball, kodwa inokuphela kwayo. Bazama ukwakha kule ngqiqo ngokubonisa umbono wabo weenkcubeko ze-woods kunye namavidiyo, izikhokelo kunye ne-RECON, umagazini we-woodsball-centric (owathi, ngokombono wabantu, wapapasha kwinqaku yam yokuqala yepayipi - ukuhlaziywa kwembambano). Baye badala iBrigade eyayihamba phambili kumabonakude asekuhlaleni esabonwayo namhlanje (cinga Facebook forballball). Enye yeempawu zabo, umdlalo wegeyimu, wawuncedo kakhulu njengoko wawuvumela abantu ukuba bathumele imidlalo kunye nabadlali ukuba bahlangane (Xa ndifudukela kwisixeko esitsha, ndayifumana ngokugcwele ukuchonga abantu abatsha ukuba badlale kunye namasimi ukuze ukudlala). Bade badala umqhubi wechungechunge lweTV (olungazange lithathwe) kwaye lukhokela i-SPPL - i-Scenario Players Players League - i-national woosdball tournament.
Isiphumo sokugxila konke kwi-woodsball kwakungenxa yokuba i-Ops ekhethekileyo yayiyimpumelelo.
Babenomgca rhoqo weemveliso ezintsha kunye nabadlali abazinikezele. Kodwa, ngaphakathi, izinto azizange zihambe kakuhle. Andinalo ulwazi lwento yonke eyenzeka ngaphakathi kwenkampani, kodwa ukusuka kumthombo oqinileyo (umqeshwa wangaphambili), izinto azizange zihambe ngokuhambelana nesicwangciso soshishino.
I-Ops ekhethekileyo, njengenkampani, yayinezinto ezintathu eziye zahamba nazo. Eyokuqala kukuba uqoqosho lugxotha kwaye abantu bayeka ukuchitha kwibala lepalati, ngokukodwa ukuphucula iziphumo eziphezulu eziye zafumana inzuzo ekuqinisekiseni ukusebenza kwakho. Okwesibini, ubuninzi bokuyila iigesi endlwini kwaye bakhiqiza kwimigangatho encinci bephezulu kakhulu kangangokuba, nangona amaxabiso aphakamileyo, kwakukho umgama omncinci kakhulu ekuthengiseni (ukuya kwinto yokuba inkampani ayizange izuze, nangona amaxesha kulungile).
Ekugqibeleni, kwaye mhlawumbi eyona nto iphazamisayo, kukuba ulawulo lwenkampani alukwazanga ukulungisa imodeli yezoshishino yenkampani ukuba ifanele ukutshintshwa kwezoqoqosho okanye ukuqonda ukuba imarike ingenakho ukuxhasa nenye yamandla amakhulu, aphezulu nkampani yepalballballball. Indlela yabo "yayihamba enkulu okanye iya ekhaya" kwaye, ngelishwa, injongo "eya enkulu" yayingayi kuba.
Isiphumo sokuphela kwalolu hlobo kukuba i-Special Ops Paintball yavala iingcango zayo ngo-2009. Yavuswa ngokufutshane njengenkampani ethembekileyo-kuphela yonyaka ngo-2010, kodwa ke ii-asethi zayo zathengiswa kwaye inkampani, njengoko yayenziwe ekuqaleni, yaphela.
I-Ops Special Paintball ngokuqinisekileyo yashiya ilifa. Kubonise ukuba abadlali basenomdla kwi-woodsball, kodwa kwabonisa nokuba akukho nkampani enye inokuchaza umdlalo. I-Woodsball iya kuhlala iqulethwe ngabadlali abatsha kunye nabadlali abazinikezeleyo abacima imali yabo kuyo. Ukusuka kwembono yenkampani, nangona kunjalo, ukudala nokuvelisa i-gear-high-end gearball gear kungenakuba yindawo efanelekileyo yezoshishino ngaphandle kokuba inkulu kakhulu. Mhlawumbi, ngelinye ilanga, umntu uya kuphinda azame kwakhona, kodwa ndiyakholwa ukuba umzekelo wezoshishino uya kukwazi ukuphumelela ixesha elide. Ukukhwela kwakumnandi, kodwa "Siyi-Woodsball" yayingasetyenziselwa ukuhlala.
Ngaba i-Paintballs Biodegrade?
Izizathu ezi-10 eziphezulu zokudlala i-Paintball
I-Kellison J5R i-Classic Piece yeFiberglass ekhohliweyo
Isivumelwano seGuadalupe Hidalgo
Hlangana neErin Hills Golf Course
Ukudlala njani i-Texas Scramble Golf Tournament
Quotes Fannie Lou Hamer
Izenzi ze 'Ukujika'
IYunivesithi yaseNebraska eLincoln (UNL)
IiNcediso eziNcedo zoKwakha ukuKhanya
I-albhamu eziphezulu ze-Twee